Iindaba-Ngokudibeneyo ne-PG & E: UTesla uza kuvula eyona projekthi inkulu yokugcina amandla eCarlifonia
Ngokwengxelo zosasazo zakwamanye amazwe, uTesla ufikelele kwintsebenziswano nePacific Power Power Company (PG&E), enye yeenkampani ezinkulu zamandla eMelika, ukuvelisa inkqubo enkulu yebhetri enomthamo ukuya kuthi ga kwi-1.1GWh yokugqibela. U-Electrek uxele ukuba le projekthi yeyona inkulu iTesla iqalile ukusukela ngo-2015 kwaye ikwi-California, e-USA. I-PG & E isebenza malunga ne-16 lezigidi zabantu kumbindi nakwinyakatho yeKhalifonia. Ingenise izicelo zokuvunywa zeprojekthi ezine zokugcina amandla kwiKhomishini yeeNkonzo zikaRhulumente zaseCalifornia (CPUC) kwiveki ephelileyo.
I-Tesla iya kubonelela iipakethi zebhetri kule projekthi intsha, kunye nokukhutshwa ngokupheleleyo kwe-182.5MW kunye nexesha ukuya kuthi ga kwiiyure ezi-4. Oku kuthetha ukuba inani elipheleleyo lifakiwe lifikelele kwi-730MWh, elingana ngaphezulu kwe-3000 yeeseti zeTeslaPowerpack2.
Ukuthatha idatha ka-2016 kuLawulo lweeNkcukacha zaMandla e-US njengereferensi, umyinge ophakathi wokusetyenziswa kombane kwabathengi beenkampani zase-US yi-10,766 kWh, okuthetha ukuba iprojekthi entsha inokubonelela ngombane kumakhaya amalunga ne-100 unyaka wonke.
Ukuba kuvunyiwe, iqela lokuqala leeprojekthi lilindeleke ukuba lihambe kwi-intanethi ngaphambi kokuphela kuka-2019, kwaye ezinye iiprojekthi kulindeleke ukuba ziye kwi-Intanethi ngaphambi kokuphela kuka-2020. Okubangela umdla kukuba, oku kubonakala kuhambelana neenjongo zikaMusk.
Ngo-2015, uMusk wabhengeza ukuba "iTesla Energy" yexesha elizayo iza kusetyenziselwa iiprojekthi ezinomgangatho we-1GWh. Kodwa ukubona oku kwenzeka, kufuneka ulinde iminyaka emithathu.
Ukuphela konyaka ka-2017, uTesla wabheja noRhulumente wase-Australia, esithi le nkampani inokugqibezela ukufakwa kwenkqubo yokugcina amandla amakhulu ebhetri kwisithuba seentsuku ezilikhulu, kwaye isebenzise indlela yokuncipha kunye nokunciphisa intlambo ukunciphisa amandla endawo ingxaki yokuphuma. igqitywe tu.
Nangona iTesla yaziwa kakhulu ngokwakha iimoto zombane, ukusuka eOstreliya ukuya ePuerto Rico, inkampani iphinda ibeke kwakhona iigridi zombane zehlabathi ukuze zenze amandla ahlaziyekayo angabizi.
Iprojekthi yase Mzantsi Australia ifumene impumelelo enkulu kwezorhwebo, kwaye kuqikelelwa ukuba igcinise ngaphezulu kweedola ezingama-30 ezigidi kwiinyanga nje ezimbalwa. Umlingani weMcKinsey uGodartvanGendt uthe kwintlanganiso yeVeki yezaMandla eAustralia eMelbourne ngoMeyi kulo nyaka:
Kwiinyanga ezine zokuqala zokusebenza kweprojekthi yokugcina amandla e-Hornsdale, imvamisa yeenkonzo zokuncedisa yancitshiswa nge-90%. EMzantsi Australia, iibhetri ezili-100MW zifumene ngaphezulu kwe-55% yengeniso yeFCAS, oko kukuthi, nge-2% yomthamo wemveliso, igalelo lama-55% kwingeniso.
I-FastCompany inika ingxelo yokuba kwiminyaka nje emithathu, inkampani ifake iziseko ezaneleyo ukugcina i-1GWh yamandla, ebaluleke kakhulu ekusebenziseni amandla ahlaziyekayo.
Kunyaka ophelileyo, I-Tesla yafumana ikhontrakthi yezona ndawo zibanzi zokugcina amandla emhlabeni. Ukuphuculwa kwe-1.1GWh yeeprojekthi ezintsha kuya kuliphinda kabini inani lamancedo ayo.
Kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba iindleko zokugcina ibhetri kuwo wonke umzi-mveliso ziyaqhubeka ukwehla-ukusuka ngo-2010 ukuya ku-2016, yehle ngama-73%, oko kukuthi, isuka kwi-1 000 yeedola zase-US nge-KWh ukuya kwi-273 yeedola zaseMelika.
I-Bloomberg ilindele ukuba nge-2025, eli xabiso liya kuphinda lihle liye kwi- $ 69.5 / KWh. Sinethemba lokuba iinzame zikaTesla eziqhubekayo ziya kukhuthaza abachasi abangakumbi ukuba bajoyine ukhuphiswano ukuqhubela phambili ukukhawulezisa le nkqubo.
Ipakethi yebhetri yamandla, Iiseli zebhetri zeLithium Ion, Ibhetri yamandla eLithium, I-20ah iLithium Ion ibhetri, I-3.6v ibhetri yeLithium-Ion, Ipakethi yeBhetri yeLithium,